विकृत वामपन्थको चपेटामा लोकतन्त्र
२०७६ बैशाख ९ सोमबार ०८:३८:००
विकृत वाम विचारले देशलाई औपनिवेशिक मोडलमा लैजाँदै छ, बुढीगण्डकी, अरुण, माथिल्लो कर्णाली विदेशी कम्पनीसामु सुम्पनुलाई औपनिवेशिक मोडल नै भन्नुपर्छ
ऐतिहासिक जरा कमजोर
राणाशासनका वेला पढ्न भारत गएका एकथरी जमिनदारका सन्तानले कांग्रेस पार्टी जन्माए । जमिनदारकै अर्काथरी सन्तानले कम्युनिस्ट पार्टी । कांग्रेस जन्माउने सुवर्णशमशेर अभिजात वर्गकै थिए । बिपी कोइराला पनि जमिनदार वर्गकै थिए । अहिले देशकै पिताजी बनाउन खोजिए पनि कृष्णप्रसाद कोइराला पहिला चन्द्रशमशेरकै मान्छे थिए । पुष्पलाल पनि उच्च वर्गकै थिए । मनमोहन अधिकारीका बुबा रामचन्द्र अधिकारी मोरङका जमिनदार थिए । केशरजंग रायमाझी नवलपरासीका ठूला जमिनदार । नेपालमा वाम विचार भारतबाट उच्च वर्गमार्फत प्रवेश ग-यो । रुसमा जार शासन अन्त्य हुनुभन्दा झन्डै सय वर्षअघि (सन् १८२४)मा नै त्यहाँका उच्च वर्गले जारविरुद्ध विद्रोह गरेका थिए । तिनलाई इतिहासमा ‘डिसेम्बरिस्ट’ भनेर चिनिन्छ । सर्वहारावादी, श्रमिकवादी भनेर मुठ्ठी कस्दै भाषण गरे पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा साँच्चिकै श्रम गर्ने वर्गबाट उदाएका निर्मल लामा र रूपलाल विश्वकर्माबाहेक मेरो जानकारीमा छैन । श्रम गर्ने हातबाहेक केही नभएको वर्गबाट कोही नेता भएनन् । भारतबाट र उच्च वर्गमार्फत छिरेको वाम विचारमा सुरुदेखि विरोधाभाष छ । अहिलेका कम्युनिस्ट नेता जमिनदार परिवारका नभए पनि गाउँका ठालुकै छोराछोरी छन् ।
भारतमै जन्मिएर नेपालमा हुर्किएको कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ मौलायो, फस्टायो । तर, भारतमै त्यति फस्टाएन । भारतमा पश्चिम बंगाल, केरला, त्रिपुरामा सीमित भए । पश्चिम बंगालमा माक्र्सवादी सत्तामा आएकै वेला नक्सलवादी आन्दोलन चर्कियो । त्यतिवेला कांग्रेस र माक्र्सवादीबीच अघोषित सम्झौता भयो- कम्युनिस्टका निश्चित ठेगानामा कांग्रेसले डिस्टर्ब नगर्ने, माक्र्सवादीले केन्द्रमा कांग्रेसलाई सघाउने । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय माक्र्सवादीको अखडा बन्नु त्यही साँठगाँठको परिणाम हो । कांग्रेस- मार्क्सवाद मिलेर नक्सलवादी आन्दोलन सखाप पारे । पश्चिम बंगालमा कांग्रेस-मार्क्सवाद सत्ता साझेदारी गरेका थिए । कांग्रेसका अजय मुखर्जी मुख्यमन्त्री र मार्क्सवादका ज्योति बसु उपमुख्यमन्त्री भए । कांग्रेससँग लम्पसार परिसकेका मार्क्सवादले १९९० को दशकमा कांग्रेसले बेलगाम पुँजीवाद भित्र्याउँदा पनि विरोध गर्न सकेनन् । सम्झौतापरस्त कम्युनिस्टलाई कांग्रेसकै उत्पादन ममता बनर्जीले सिध्याइदिइन् । तै पनि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा भोट पाएका छन् । दुईतिहाइको सरकार बनाएका छन् । राजनीतिमा नारा चल्छ । शोषणबाट मुक्त गरिदिने भाषण गरेका छन् । आदर्शको कुरा छाँटेका छन् । कांग्रेस पनि बिपीको समाजवाद भनेरै भोट माग्छ । जनतालाई त्यो भ्रमबाट मुक्त हुन समय लाग्नै नै देखिन्छ । चुनाव पनि कस्तो भने रघुजी पन्त र युवराज ज्ञवालीले टिकट पाएनन् । स्थानीय सरकारमा जित्ने आधाजति ठेकेदार छन्, आधाजति डोजर धनी । पैसा नभई चुनाव नजितिने परिपाटी आयो । मोहन वैद्यजस्ता कम्युनिस्ट त राजनीतिमा गुमनाम छन् । यसैले यिनले पाएको भोटलाई कम्युनिस्ट भएको कारण आएको ठान्ने कि नठान्ने ?
कम्युनिस्ट सरकारको अर्थराजनीति
विरोधाभाषमा जन्मिएको वामविचार झन्–झन् विरोधाष र भ्रम हुँदै विकृत वामविचारमा परिणत भएको छ । राजस्व बढायो भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको वाहवाही भयो । तर, अघिल्लो वर्ष तीन लाख किलोलिटर रहेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात त्यो वर्ष दोब्बर भएको थियो । पेट्रोलियममा लाग्ने उच्च कर÷भन्सारले गर्दा राजस्व बढेको थियो । विलासी गाडीको आयातले पेट्रोलियम आयात बढाएको थियो । काठमाडौंको बाटो चौडा पार्दा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको तारिफ हुन्छ । सडक चौडा हुँदा मजस्तो निजी गाडी लिएर हिँड्नेलाई फाइदा हुने हो । समाजवादीले त सार्वजनिक यातायात बलियो बनाउनुपर्ने थियो । पखाला लागेपछि जीवनजल खुवाउनुपर्नेमा घरमै शौचालय थप्ने काम गरियो । यस्तै विरोधाषमा छन्, नेपाली कम्युनिस्ट ।
बाँसबारी छाला जुत्ताले थुप्रैलाई रोजगारी दिएको थियो । छालाको यस्तो माग थियो कि काठमाडौंमा छाला भएको मासु पाउनै गाह्रो भएको थियो । हजारौँमा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको थियो । अप्रत्यक्ष रोजगारी अझ धेरै । तर, अहिले कस्तो कमिसन व्यापार मौलायो भने एउटा अफिस खोल्यो, दुई-चारजना स्टाफ राख्यो । बाहिरबाट जुत्ता मगायो । कर, भन्सारमा हेराफेरी ग-यो, कुस्त मुनाफा कमायो । यही खालको बेलगाम पँजीवाद आयो । औद्योगीकरणको सुरुवात जुद्धशमशेरको पालामा भयो । बरु राजा महेन्द्रको नीति समाजवादी थियो, समाजवादी भनिनेले बेलगाम पुँजीवाद भित्र्याए । संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य लेखिएको छ । तर, दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार लगानी सम्मेलन गर्छ । लगानी सम्मेलन र समाजवाद विरोधाभाषी कुरा हुन् । लगानी सम्मेलन गरी विदेशी लगानी भित्र्याउनु आफैँमा ‘इस्ट इन्डिया कम्पनी मोडल’ हो । विदेशीले लगानी गर्छन, कुस्त मुनाफा गर्छन्, लैजान्छन् । लगानी सम्मेलनलाई सही ठह-याउने हो भने महात्मा गान्धी गलत थिए भन्नुपर्ने हुन्छ, जसले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरे, इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई लेखेटे । तैपनि यो लेनिनवादअनुकूल छ भन्न सकिन्छ । लेनिनले अर्मान्ड हामर (जो पछि अक्सिडेन्टल पेट्रोलियमको मालिक भए-लाई १९२१ तिर रुसमा पेन्सिल उद्योग खोल्न इजाजत दिएका थिए ।
के मार्क्सवाद वैज्ञानिक छ ?
युरोपमा पुँजीवादको चरम दोहनको समयमा माक्र्सको दर्शन जन्मियो । पुँजीवादले समाज तहसनहस थियो । चरम शोषणको अवस्थामा यो सब कसरी भयो, कसरी मुक्ति सम्भव छ भन्ने सन्दर्भमा मार्क्सवादले गरेको चिन्तन मार्क्सवाद हो । औद्योगिक क्रान्तिअघि सामन्त हुन्थे, चर्चमा पादरी हुन्थे । भेडा पाल्ने भेडा पालिरहेको हुन्थ्यो, खेती गर्ने खेतमा व्यस्त हुन्थ्यो । गाउँमा इष्टमित्र हुन्छन् । मनलाग्दा काम ग-यो, नलाग्दा आराम ग-यो । एक खालको जीवनशैली हुन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछि नाफाका लागि उत्पादन हुन थाल्यो । बढी नाफा गर्न धेरै उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना हुन थाले । श्रमिक चाहियो, श्रम गर्न किसानलाई गाउँबाट सहरमा ल्याइयो । किसान जमिनबाट विस्थापित भए । गाउँसँग सामाजिक सम्बन्ध टुट्यो । ऊ श्रमिक मात्र भयो । अहिले श्रम गर्न खाडी पुगेका नेपाली कामदारको जस्तो हाल भयो- बिहान उठेपछि खाने, काममा जाने बेलुका खाने, सुत्ने । अनि समस्या देखिन थाल्यो ।
आइज्याक न्युटनले ब्रह्माण्ड चल्ने नियम खोजेझैँ माक्र्स समाज विकासको नियम खोज्ने प्रयास गर्छन् । उनले श्रमकेन्द्रित विकास खोजे । तर, विकास श्रम मात्र होइन, सूचना, व्यवस्थापन आदि पनि हो । यहाँका कम्युनिस्टले बारम्बार वैज्ञानिक शब्द प्रयोग गर्छन् । माक्र्सवाद वैज्ञानिक हो, अन्तिम सत्य हो भन्ने खाले कुरा गर्छन् । कार्ल पप्पर भन्छन्- विज्ञानमा अन्तिम सत्य हुन्न । वैज्ञानिकले 'अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानले यो सिद्धान्त प्रतिपादन गरेँ, यसलाई गलत साबित नगरेसम्म यही सत्य हो’ भन्छन् । यहाँका कम्युनिस्टले माक्र्सवादलाई धर्मको रूपमा ग्रहण गरे, अन्धभक्ति देखाए । तर, यस्तो धर्मभिरू भए, जो पूजापाठ आदिमा धार्मिक देखिन्छ, तर कर्म धर्मले देखाएको भन्दा उल्टो गर्छ ।
महेन्द्रको नीति समाजवादी थियो, समाजवादी भनिनेले बेलगाम पुँजीवाद भित्र्याए, संविधानमा समाजवादउन्मुख राज्य लेखिएको छ, तर दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार लगानी सम्मेलन गर्छ
माक्र्सले भनेका कतिपय कुरा उहिल्यै गलत साबित भइसकेका थिए । पुँजीवाद विकास भएको ठाउँमा क्रान्ति हुन्छ भनेका थिए । तर, युरोपमा पिछडिएको रुसमा क्रान्ति भयो । पुँजीवादको विकास नभएका चीन, भियतनाम, उत्तर कोरियामा क्रान्ति सफल भयो । माक्र्सवादको कुरा त ऊबेलै हावा खायो । त्यसैले माक्र्सवादले भन्नेबित्तिकै वैज्ञानिक हुँदैन । माक्र्स भन्छन्, पुँजीको चरित्र शोषक हुन्छ, एकले अर्कोलाई खाँदै पुँजी झन् केन्द्रित हुन्छ । खाडल हुँदै गएपछि द्वन्द्वले साम्यवादी क्रान्ति हुन्छ । तर, पुँजीवादको इतिहास हेर्दा केन्द्रित होइन, पुँजी विस्तारित हँुदै गएको छ । धनी झन्–झन् धनी भएका छन्, तर पुँजीकेन्द्रित होइन । धन र पुँजीमा अन्तर छ । परिचालन गरेर थप पुँजी आर्जन गर्नु पुँजी हो । परिचालन नगरिएको धन हो । पञ्चायतकालमा सुनबुढा भनेर चिनिने एकजना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य थिए- सुन संकलन गर्ने सोख भएका उनको घरमा दाउरा खात लगाएजसरी सुन खात लगाएर राखेको सुनिन्थ्यो । ती सुनबुढाको सुन धन हो, पँजी भएन । मानव सभ्यतामा सन् १५०० तिर बल्ल पुँजी परिचालन गरी पुँजी बढाउने सोच आएको हो । त्योभन्दा अघि ब्याज लिन पाइँदैनथ्यो । चर्चले ब्याज लिनुलाई पाप मान्थ्यो, प्रतिबन्धित थियो । इस्लाममा अहिले पनि ब्याज बर्जित छ । यसैले पुँजीवाद आउनुमा चर्चको भूमिका पनि छ भन्ने गरिन्छ ।
हामीकहाँ गरिब थिए र छन्, तर श्रम गर्ने हातबाहेक केही नभएका सर्वहारा सायद थिएनन् । सहरमा श्रम गर्नेको पनि गाउँमा झुपडी नै सही घर-जग्गा गाई-भैँसी, कुखुरा, बाख्रा हुन्छ । एउटा कार्यालय सहयोगीले पनि सम्मानपूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गरेको हुन्छ, गाली ग-यो भने काम छाडेर हिँड्दिन्छन् । गाउँ फर्के पनि भातै खानचाहिँ समस्या हुँदैन । बरु माक्र्सकालीन युरोपका श्रमिकजस्तो वर्ग बितेको दुई दशकमा तयार भएको छ– खाडीमा नेपाली कामदार । जिडिपीमा रेमिट्यान्सको योगदान ३० प्रतिशत पुगिसक्यो । रेमिट्यान्स आप्रवाहको वृद्धिदर २० प्रतिशत छ । अर्थतन्त्र धानिएको छ । तर, तिनको मुद्दा अर्बपति नेपाली माक्र्सवादीले सम्बोधन गर्नेवाला छैनन् ।
मार्क्सवाद कि लेनिनवादमा समस्या
लर्ड मेघनाद देसाई माक्र्स होइन, लेनिन समस्या हुन् भन्छन् । जंगबहादुर बेलायत भ्रमणमा हुँदा माक्र्स लन्डनको लाइब्रेरीमा बसेर लेख्दै थिए । दास क्यापिटलको पहिलो भाग लेखेपछि माक्र्स स्वयं अलमलमा थिए भनेर देसाईले लेखेका छन् । माक्र्सले पुँजीवाद संकटग्रस्त छ, धराशायी हुन थाल्यो भनेर त लेखे । तर, पँुजीवाद झन् बलवान् हुँदै गयो । यसैले माक्र्सले आफ्नो जीवनकालमा दास क्यापिटलको अरू भाग छापेनन् । मार्क्सको निधनपछि एंगेल्सले छापेका थिए । पुँजीवाद आफैँभित्रको अन्तरविरोधले अन्त्य हुने विश्लेषण माक्र्सको थियो । तर, पुँजीवादले चरित्र फे-यो र बलवान् हुँदै गयो । मार्क्सले प्रयोग गरेको शोषण शब्दमै पनि विरोधाभाष देखिन थाल्यो । पुँजीले श्रमको शोषण गर्छ भन्थे उनी । श्रमले पनि पुँजीको शोषण गर्दो रहेछ भन्ने उहाहरण नेपालमै छ ।
माक्र्सवादआधारित क्रान्ति २०औँ शताब्दीको आधाउधीसम्म सफल भयो र बाँकी आधामा असफल भयो भन्ने विश्लेषण छ । माक्र्सवादको प्रयोगकर्ताले काँचो माक्र्सलाई प्रयोग गरे पाको माक्र्स प्रयोग गरेनन् भन्ने ठम्याइ लर्ड देसाईको छ । माक्र्सवाद र लेनिनवादलाई जोडेर हेरिन्छ । तर, माक्र्सवाद दर्शन हो, लेनिनवाद संगठन चलाउने तरिका मात्र । प्रथम विश्वयुद्धमा जुन चरम समस्या आयो, सोसल डेमोक्र्याटले जारलाई पाखा लगाइसकेका थिए । रुसमा क्रान्ति फेब्रुअरीमै भएको थियो । यसलाई लेनिनले बुर्जुवा क्रान्ति भनिदिए । अक्टोबरमा गएर पेसेवर क्रान्तिकारीले संगठित भई अस्थिरता ल्याएर सत्ता कब्जा गरेका थिए । भन्नलाई सर्वहाराको अधिनायकत्व भनिए पनि पोलिटब्युरोको अधिनायकत्व थियो । अझ पोलिटब्युरोमा महासचिवको अधिनायकत्व थियो । स्टालिनको पालामा आइपुग्दा उनको बोली नै कानुन भइसकको थियो । क्रमशः लेनिनले देखाएको बाटोअनुसारै क्रान्ति भयो । पेसेवेर क्रान्तिकारीले सत्ता कब्जा गरे, जंगबहादुरको स्टाइलमा । जंगबहादुरले भाइलाई संगठित गरी विरोधीलाई काटेर सत्ता कब्जा गरेका थिए । लेनिनवादमा मार्क्सवादको अंश कमै भेटिन्छ । यसैले त देसाई भन्छन्– बर्लिन पर्खाल ढल्नु भनेको माक्र्सले लेनिनसँग लिएको बदला हो । कब्जा गरिएको सत्ता टिकाउन एउटा वादको जामा पहि-याउन जरुरी थियो, यसैले माक्र्सवाद भनियो । मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्नु नै गलत हो । लेनिनवादको माक्र्सवादसँग टाढाको साइनो मात्रै छ ।
यहाँका कम्युनिस्टले मार्क्सवादलाई धर्मको रूपमा ग्रहण गरे, अन्धभक्ति देखाए, तर त्यस्तो धर्मभिरू भए, जो पूजापाठ आदिमा धार्मिक देखिन्छ, तर कर्म धर्मले देखाएको भन्दा उल्टो गर्छ
पहिलो विश्वयुद्धको खरानीमा कम्युनिस्टले रुस र पूर्वी युरोप कब्जा गरे । दोस्रो विश्वयुद्धमा माओ, होची मिन्ह, किम इल सुङको नेतृत्वमा चीन, भियतनाम, उत्तर कोरियामा सत्ता कब्जा भयो । क्युबाको अवस्था फरक हो । बातिस्तालाई सिध्याएर स्पेनिस प्रभाव पाखा लगाउन अमेरिकाले पनि सहयोग गरेको थियो । लेनिनको शैलीमा सत्ता कब्जा गरी सत्ता कायम राख्न अनुशासित पेसेवेर क्रान्तिकारी संगठन चाहिन्छ । कमान्डरप्रति अगाध विश्वास चाहिन्छ । भियतनाममा होची मिन्ह राष्ट्रपति भएपछि राष्ट्रपति निवासमा बस्न थाले । तर, जंगलमा गुरिल्ला युद्ध गर्दै हिँडेका उनलाई आलिसान राष्ट्रपति निवासको भव्य पलङमा निद्रा लागेन । उनले निवासनजिकै बाँसको छाप्रो बनाउन लगाए, सामान्य खटियामा सुत्न थाले । यसरी कमान्डरप्रति विश्वास कायम रहने हो । सत्तामा पुग्नासाथ लाखौँको पलङ र उपचार गर्न अमेरिका पुग्न थालेका कमान्डरलाई त फौजले हामीलाई सिटामोल छैन, तिमीचाहिँ उपचार गर्न अमेरिका ? भनेर प्रश्न गर्छ ।
समाजको वास्तविकता र साम्यवादी दर्शन
नेपालमा पहिचानको बहस धेरै चल्यो । तर, जातीय पहिचानको बहस भयो । जबकि परम्परागत रीतिरिवाज, संस्कृति आदिका पहिचान महत्वपूर्ण छन् । यसमा पनि वामपन्थी विरोधाभाषमै छन् । तिनले जातीय पहिचान, जातीय आरक्षण आदिको वकालत गर्छन् । बरु कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा र क्षेत्री समाजले वर्गको आधारमा गरिबलाई आरक्षणको माग गरे । सारमा भन्दा भौतिकवादले होइन, आदर्शले निर्देशित गरेको समाज छ, हाम्रो । एउटा अध्ययनअनुसार सन् २०१० सम्म हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने ६० प्रतिशतजति थिए । अहिले ७४ प्रतिशत छन् । मान्छेको विचार कब्जा गर्ने त अरू नै चिज रहेछ । संस्कृति, परम्परा आदि । परम्परा, संस्कृतिमा हठात् हस्तक्षेप गरी क्रान्तिकारी भइने भ्रम छ । भारतमै सबरीमाला मन्दिरमा हस्तक्षेप गर्दा ठूलो प्रतिक्रिया भयो । महिलाको प्रवेश निषेधित भयो भन्दैमा हस्तक्षेप गरिहाल्नुहुँदैन । त्यसो त कहीँ-कहीँका मन्दिरमा विवाहित पुरुषलाई पनि प्रवेश निषेधित छ । अर्को कुरा, परिवर्तनको अभियानमा भित्रिया नै हुनुपर्छ, बाहिरियाको प्रेरणा देखिए प्रतिकार हुन्छ । योगमायाको विद्रोहले सतीप्रथा अन्त्य गर्ने अभियान सफल हुनुको कारण त्यो अर्गानिक थियो, बाहिरियाको प्रेरणा थिएन । अहिलेजस्तो कुनै डोनरको सहयोगमा भएको भए त्यति प्रभावकारी हुन्थेन । हाम्रा सामाजिक आन्दोलनमा अहिले यही समस्या छ ।
नेपाली अर्थराजनीतिको वास्तविकता
रेमिट्यान्सको योगदान जिडिपीमा ३० प्रतिशत छ । अहिले श्रम बेचेर चल्ने राजनीति, मोज गर्ने जनप्रतिनिधि भएको छ । उद्योग पुँजीबाट चलेको छैन । म्यानपावरले पठाएका श्रमिकको कमाइबाट चलेको छ । नवदास युगको आभाष हुन्छ  । नेपालमा जलस्रोतलाई समस्या बनाउँदै गरिबी बेचेर खाने काम भयो । औद्योगीकरण गर्ने हो भने विद्युत् र पानी रणनीतिक स्रोत हो, व्यापारिक उत्पादन होइन । यहाँ उत्पादन हुने बिजुली बाहिर बेचेर बाहिर उद्योग खुल्छन् कि नेपालमा ? सरकारले लगानी गर्नुपर्ने जलाशययुक्त योजना गेजुवा, जिएमआरलाई टक्र्यादिइएको छ । बाहिर बेच्ने सम्झौता गरिएको छ । अनि शतप्रतिशत निजी लगानी भइरहेको ठाउँमा सरकारले लगानी गर्ने, प्रधानमन्त्रीले सेयर किन्ने भइरहेको छ । विकृत वामविचारले देशलाई औपनिवेशिक मोडलमा लैजाँदै छ । बुढीगण्डकी, अरुण, माथिल्लो कर्णाली विदेशी कम्पनीलाई सुम्पनुलाई औपनिवेशिक मोडल नै भन्नुपर्छ । र, नेपालमा चलेको वामपन्थ होइन, हामपन्थ हो । हामपन्थको बाटो लागेर नेपालीले खान पाउने होइन, विदेशीले हाम पार्ने हुन् ।
#विकृत वामपन्थ # लोकतन्त्र
राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपाल : विश्वमा सिर्जित विषमपूर्ण परिस्थितिलाई पराजित गर्न लोकतन्त्र र बहुपक्षवादको विकल्प छैन
राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र
भारतीय लोकतन्त्रका चुनौती
सोभियत ‘कु’ असफलताका तीस वर्ष : कहाँ चुक्यो लोकतन्त्र ?
अफगानिस्तान द्वन्द्व : लोकतन्त्र निर्यातको असफलता
‘सार्वजनिक पदमा ठेकेदारको बाहुल्य हुनु भनेको लोकतन्त्रको विकृत रूप हो ’